संविधान सभाको म्याद नजिकिँदै गर्दा, विभिन्न संगठनहरुको नाममा दिनहुँ जसो बन्द को आयोजना गर्ने गरिएको छ । अस्ति क्षेत्री समाजले काठमाडौँ उपत्यका बन्द गर्यो, हिजो पूर्व बन्द गर्यो, आज मातृका यादव को पुनर्गठित माओवादीले नेपाल बन्द को आह्वान गर्‍यो । केही दिन अघि देखि ब्राम्हण समाजले पश्चिमाञ्चलमा बन्द गरेको थियो । कहिले कुन संगठन को नाम मा त, कहिले कुन संगठन को नाम मा । यहाँ दिनहुँ बन्द हुन्छन् भन्दा फरक नपर्ला । बन्द गर्ने बानी, हाम्रो दिर्घ रोग नै भइसक्यो ।
आज मातृका यादव को समूह को आह्वान मा नेपाल बन्द गरियो । काठमाडौँ उपत्यकामा गाडी फाट्टफुट्ट चलेपनि, तराई का जिल्लातिर भने, बन्द को प्रभाव अत्याधिक परेको कुरा, टेलिभिजनहरु ले आफ्ना समाचार मा प्रसारण गरिरहेकाछन् । २ दिन अघि पनि काठमाडौँ बन्द नै थियो, क्षेत्री समाज को आह्वान मा । तर त्यसै दिन केही युवाहरु ले ठमेलमा ‘मोटरसाइटक र्याली’ गरेर बन्द को विरोध गरे । अनि आज पनि बन्द, तर आज को बन्द काठमाडौँ मा उनीहरुले सोचेको जति सफल हुन सकेन । स्कुल, क्याम्पस बन्द भएपनि, ट्याक्सी, ट्याम्पु जस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनहरु गुडिरहेको कुरा, साथिहरुले ट्विट र फेसबुक मार्फत बताइरहनु भएको छ । बिहान केही थोरै सवारी साधन देखिएपनि, अहिले ट्याम्पु र बाइकहरु प्रशस्तै गुडेको देख्न सकिन्छ । साँच्चै भन्दा आज को बन्द काठमाडौँ मा भने विफल भयो भन्दा फरक पर्दैन । अनि नेपालीहरुलाई बन्द चाहिएको पनि छैन ।
यही बन्द कै सिलसिलामा फेसबुक र ट्विटर का नेपाली प्रयोगकर्ताहरुले बन्द को विरोध आफ्ना ट्विट र स्टाटस मार्फत व्यक्त गरिरहेकाछन् । ट्विटर प्रयोगकर्ताहरु आफू पुगेको ठाउँमा बन्द के कस्तो छ भनेर, ट्विटर मार्फत निरन्तर जानकारी गराइरहनु भएको छ । हामीले ट्विटर र फेसबुक मा देखिएका केही प्रतिक्रियाहरुलाई यहाँ राख्ने जमर्को गरेका छौँ ।
बिहानै काठमाडौँ को यात्रा गर्नुभएका @acharya14 का अनुसार सानेपा देखि वनस्थली (सानेपा – सातदोवाटो – कोटेश्वर – गठ्ठाघर – वानेश्वर –अनामनगर – पुतलिसडक - टिचिङ हस्पिटल – बसुन्धारा – नयाँवसपार्क – वनस्थली) पुग्दा, बाटो मा थोरै सार्वजनिक यातायात का साधन देखिएपनि बन्दकर्ताहरु कतै देखिएन । उहाँ ले विहानै ‘आफ्ना सवारीसाधन चलाएर निस्किए हुने’ कुरा ट्विट मा बताउनु भएको थियो ।
त्यस्तै @dacharya का अनुसार, पुरानो वानेश्वर >> डिल्ली बजार >> शहिद गेट>> त्रिपुरेश्वर >> टेकु सम्म गाडिमा पुगेर फर्कँदा कहिँ कतै बन्द आयोजक देखिएनन् ! उहाँ को जस्तै अनुभव @wordswave को पनि रहेको थियो । @wordswave का अनुसार जोरपाटी >> गोठाटार >> मुलपानी >> पेप्सिकोला >> जरिबुटी >> कोटेश्वर >> बालकुमारी सम्म बाइकमा आउँदा कहिँ कतै बन्द आयोजक देखिएनन् :)
@nepaldiary ले ठिमी >कौसलटार >कोटेशोर > नयाँ बानेश्वर > दुई चक्कर संबिधान सभा > गौशाला >चाबेल> कपन नो बन्द । भनेर ट्विट गर्नुभएको थियो ।
यसबाहेक, ट्विटर मा बन्द को विरोधमा साथीहरुले ट्विट गरिरहनुभएको छ । बन्द को विरोधमा आवाज उठाउँदै ख्यालठट्टा गरिरहनु भएको छ । बन्द को विषयमा देखिएका केही ट्विटहरु को स्क्रिनसट हामी यहाँ राख्दैछौँ । हामीलाई बन्द पुगिसकेको छ है !
त्यसो त बन्द को विरोधमा फेसबुक का स्टाटसहरु पनि धेरै देखियो । सबै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरु बन्द को विपक्ष मा देखिनूभएको थियो । यही बन्द कै विरोधमा पनि फेसबुकमा धेरै पेजहरु खुलेकाछन् ।
~DIE NEPAL BANDHA~
पूनश्च: यदि कसैलाई यहाँ आफ्नो ट्विट प्रकाशित हुँदा आपत्ति छ भने, जानकारी गराउनुहोला !
banda garne virus haruko daha saskar garna parno bho nepal ma aba ta achakali nai garna lage labastara haru le kahi nabhako ganatantra lage6 mora haru lai////////
बिहान एकछिन टेकु नेर त झण्डै जाममा परेको थिएँ :) ।
जे-जस्तो नारा र जोसुकैले गरे पनि म बन्द को विरोधी हुँ । मेरो विचारमा कुनैपनि रचनात्मक काम गर्न नसक्नेले आयोजना गर्ने र जनताले नै दु:ख पाउने भएकोले "बन्द मुर्खले आयोजना गर्ने र महामुर्खले समर्थन गर्ने जनमारा कृत्य मात्रै हो"
S.Acharya August 1, 2012 at 11:51 AM
whatever no band plz, WORK AND LET WORK,